Madaxweyne Safar Raadis ah | Voice Of Somalia
Waxaa kale oo ii soo baxay in hantida Qaranka ee sida ku khaladka ah loogu kharash gareynayo safarrada dibaddu, ay ka sii dartay markii uu xilka qabtay Ra’iisal Wasaaraha hadda jooga Cumar Cabdirashiid oo dalka dibadda uga maqnaa 33 maalmood oo ka mid ah 100 maalmood ee ugu horreysay. Safar uu ku tegey Qatar wuxuu horkacayay wafdi ka kooban 25 xubnood. Hadda oo aan qorayo maqaalkaan, isaga iyo ku xigeenkiisuba waxay ku maqan yihiin safarro dalka dibaddiisa ah oo dalal badan ay isu marayaan. Sidoo kale waxaa dibadda ku maqan Wasiirro dhowr ah iyoMadaxweynaha oo Koofur Afrika u ambabaxay.
Dowladdu waxay mar kasta sheegtaa in amnigu yahay yoolkeeda ugu muhiimsan. Sidoo kale amnigu wuxuu si muhiim ah uga mid yahay lixda tiir ee Madaxaweynuhu sheegay in siyaasaddiisu ay ku saleysan tahay. Laakiin xaaladdu waxay ka marag kacaysaa taas wax ku lid ah.Ugu dambeyntii markii uu gargaar caafimaad helay, ma ahayn mid ay Dowladdu u fidisay. Wuxuu ahaa mid ay taageerayaashiisu abaabuleeen. Haddii Madaxweynuhu go’aansan lahaa in uu safarradiisa dhimo, waxaa laga yaabaa in lacag ku filan loo heli lahaa oo lagu taageero fannaaniinta sida Cabdi Tahliil oo kale ah. Madaxweynuhu waa awooday in uu dhimo safarradiisa si ay fannaaniinteennu ay ugu noolaadaan si sharaf leh, taas oo ay muteysteen xaqna ay u leeyihiin.